I-Valley Valley, i-Lowest and Bestest in the US
Geography Geography Physical
Funda Iimpawu Ezilishumi malunga neNtlambo yokuFula
I-Valley Valley yinxalenye enkulu yeNdlango yaseMojave e-California eduze nomda wayo ne-Nevada. Ininzi yeSigodi sokufa se-Inyo County, eCalifornia yaye iqulethe i-Death Valley National Park. I-Valley Valley ibalulekileyo kwi -geography yase-United States kuba ithathwa njengeyona ndawo ephantsi kunazo zonke e-US ephezulu. Ummandla ungomnye wezona zifudumele kakhulu kwaye zihamba kakhulu kweli lizwe.
Oku kulandelayo uluhlu lwezinto ezilishumi ezibalulekileyo zeendawo ezizaziyo malunga neCreat Valley:
1) I-Valley Valley inendawo engamaekhilomitha-skwele angama-3,000 (7,800 sq km) kwaye iyagijima ukusuka ngasentla ukuya ngasentla. Uxhomekeke kwiMargosa Range empuma, iParamint Range entshonalanga, iSylvania Mountains ukuya ngasentla kunye ne-Owlshead Mountains ukuya ngasentla.
2) Intlambo yokufa ikhona iikhilomitha ezingama-123 kuphela (kwiikhilomitha ezingama-123) ukusuka kwiNtaba iWhitney , kwindawo ephezulu kwi-US ehamba phambili kwii-14,505 ii-mitha.
3) Imozulu ye-Death Valley ibomileyo kwaye ngenxa yokuba ilawulwe yiintaba ngeenxa zonke, abantu abashisayo nabomileyo bahlala bexakeke entlamini. Ngoko ke, ukushisa okushisa kakhulu akuqhelekanga kuloo ndawo. Ubushushu obushushu kakhulu obhalwa kwi-Death Valley babengu-134 ° F (57.1 ° C) kwiFurnace Creek ngoJulayi 10, 1913.
4) Umyinge wamaqondo asebusika e-Death Valley aphindaphinda afike kwi-100 ° F (37 ° C) kunye nobushushu obushushu bukaAgasti obuphezulu kwiFurnace Creek ngu 113.9 ° F (45.5 ° C).
Ngokwahlukileyo, umyinge weJanuwari ophantsi u-39.3 ° F (4.1 ° C).
5) I-Valley Valley yinxalenye ye-US Basin kunye nephondo leRange njengoko liphantsi eliphantsi kweentaba eziphakamileyo. I-geologically, ibhasi kunye nezobugcisa bezobugcisa zenziwa ngokunyakaza kweephoso kummandla obangela umhlaba ukuba wehlise ukuze uvelise izilambo kunye nomhlaba ukuphakama ukwenza iintaba.
6) I-Valley Valley iqulethe iitafile zetyuwa ezibonisa ukuba loo ndawo yayiyilwandle elikhulu elisezantsi ngaphakathi kwexesha lePleistocene. Njengoko uMhlaba waqala ukufudumala kwiHolocene , i-echibi e-Death Valley yanyuka kwizinto ezikhoyo namhlanje.
7) Ngokomlando, iNtlamfa yokuFafa ibuyele kwikhaya leMveli yaseMelika kwaye namhlanje, isizwe saseTimbisha, esiye kwintlambo ubuncinane iminyaka eyi-1 000, sihlala kuloo mmandla.
8) NgoFebruwari 11, 1933, iSigodi sokufa senziwe iSikhumbuzo sikaZwelonke nguMongameli uHerbert Hoover . Ngowe-1994, loo ndawo yabuyelwa kwakhona njengeSizwe sePaki.
9) Uninzi lwezityalo kwi-Death Valley linezityalo eziphantsi okanye ezingekho ziqhamo ngaphandle kokuba zikufutshane nomthombo wamanzi. Kwezinye izindawo eziphezulu ze-Death Valley, uJoshuwa Trees kunye neBristlecone Pines zifumaneka. Ngentwasahlobo emva kwemvula yasebusika, iNtlamfa yokuFafa iyaziwa ukuba ineziqhamo ezinkulu kunye neentyantyambo ezinentyantyambo kwimimandla yazo.
10) Intlambo yokufa ihlala kwiintlobo ezininzi ezahlukeneyo zezilwanyana ezincinci, iintaka kunye nezilwanyana ezinwabuzelayo. Kukho iintlobo ezininzi zezilwanyana ezincinci kule ndawo ezibandakanya i-Bighorn Sheep, i-coyotes, i-cocotes, i-fox, kunye neengonyama zeentaba.
Ukuze ufunde okungakumbi malunga neNtlambo yokuFafa, tyelela iwebhusayithi esemthethweni ye-Death Valley National Park.
(2010, Matshi 16). Death Valley - i-Wikipedia, i-Free Encyclopedia. Ifunyenwe kwi: http://en.wikipedia.org/wiki/Death_Valley
Wikipedia. (2010, Matshi 11). I-Park Valley National Park - i-Wikipedia, i-Free Encyclopedia . Kubuyiselwa kwi: http://en.wikipedia.org/wiki/Death_Valley_National_Park
IJografi yoMntla weNtlabathi
IiWolf kunye neBeavers kwiNgcaciso yeNxweme yaseYellowstone
Iilwimi zesiJamani - iWissen - ukwazi iYi nyaniso
I-10 Eyona Imfihlelo Engamangalisa Imiphakathi Elahlekileyo
Kuphi ukukhwela iHog Boar Hog, kunye neGugu elingakanani ukusetyenziswa